BlazBlue RR - Real Action Game 1.28 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.28 လြန္ခဲ့ေသာ7လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ BlazBlue RR - Real Action Game
BlazBlue RR - Real Action Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
!!!!! အကြံပြု Android ဗားရှင်း: အန်းဒရွိုက် 5.0 သို့မဟုတ်အထက် !!!!!
"BlazBlue RR - ရီးရဲလ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်း" မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအပေါ်တစ်ဦးတော်လှန်ရေး 2D side-scrolling တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ဂျပန်စကားသံကိုသရုပ်ဆောင်တွေအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်၎င်း၏လက်ရာမြောက်သော 2D ဂရပ်ဖစ်, ရှေးရိုးစွဲတိုက်ပွဲများအတွေ့အကြုံနှင့်ဇာတ်ကောင်အသံနှင့်အတူဒီဂိမ်းအမှန်တကယ်အနုပညာအလုပ်နှင့်မှင်တက်မိကစားသမားချန်ထားမည်။ ဂိမ်း၏နောက်ထပ်ထူးခြားပြောင်မြောက် feature ကိုကျွမ်းကျင်သေးလွယ်ကူသောစတိုင်က၎င်း၏ထူးခြားသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ဖြစ်ပါတယ်, ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Touch-and-ပွတ်ဆွဲထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကဧကန်အမှန်ကစားသမားမှအဆုံးစွန်တိုက်ပွဲဂိမ်းအတှေ့အကွုံဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
-BlazBlue တော်လှန်ရေး Reburning Features-
[တရားဝင်လိုင်စင်။ Authorized Blazblue]
Arc System ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အခွင့်အာဏာကိုသာ Blazblue အရေးယူမှုမိုဘိုင်းဂိမ်း, Toshimichi Mori, မူရင်းစီးရီး၏ထုတ်လုပ်သူများကကြီးကြပ်, ဿုံဂန္ထဝင်ဇာတ်ကောင်နှင့်မူရင်းစီးရီး၏ရွေ့လျားပွနျလညျထူထောငျ, တီဗီ anime ၏ဇာတ်လမ်း recurred, အပေါငျးတို့သအမှတ်ရစရာစကားကွက်ထည့်သွင်း ။
ကျနော်တို့လူမဆနျကို virtual ခလုတ်စွန့်ပစ်, တစ်မူထူးခြားတဲ့အသာပုတ်ပါ-and ဆလိုက်ထိန်းချုပ်မှု mode ကိုဖန်တီး (ကြှနျုပျတို့သညျဤများအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်), အပေါငျးတို့သရွေ့လျားသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်နှင့်အတူဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်, သင့် Arcade တိုက်ပွဲများဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောလန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကပေး ။ အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုမရှိအေးမြဆင်းအချိန်ရှိသည်စနစ်တကျဖျော်ဖြေသောအခါ, သငျသညျန့်အသတ် combo အောင်မြင်ရန်နိုငျသညျ!
ဆုံးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ 2D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်လှပသောမူရင်းလက်ရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ် အခြေခံ. အများဆုံးစစ်မှန်ဂျပန်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်။ ဆုံးခေတ်မီစစ်တိုက်သက်ရောက်မှုများနှင့်တင်ပြချက်ရွှေ့, ဿုံကိုသင်အကောင်းဆုံးသောတိုက်ပွဲများအတှေ့အကွုံပေး, Blazblue ၏တိုက်ပွဲတွေစတိုင်ပွနျလညျထူထောငျ!
Tomokazu Sugita, Yuuichi Nakamura, Aoi Yuuki, Tetsuya Kakihara, Akira Ishida ... ဂျပန် A-list ကိုစကားသံကိုသရုပ်ဆောင်တွေများစွာဒီဂိမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှီဝဲလျက်, ဂိမ်းဂီတဂျပန်မာစတာဂီတပညာရှင် Daisuke Ishiwatari အားဖြင့်ရေးစပ်ခဲ့, သင်တို့၏နားရွက်နိုးနှင့် listen စစ်တိုက်ခြင်းငှါသံ!
[သူရဲကောင်းများ Unlock နှင့်သူတို့၏အနှောင်အဖွဲ့ပိုမိုနက်ရှိုင်း]
အ Blazblue စီးရီးထဲကလူကြိုက်များဇာတ်ကောင်ကစားသမားကိုအထူးပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသော့ဖွင့်နိုင်, အခြားပြီးနောက်တစ်ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသူရဲကောင်းသင်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်ထူးခြားသောတိုက်ပွဲများစတိုင်ရှိပြီး, ဇာတ်ကောင်တို့တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖို့အရေးပါလှသည်, ပိုမိုသူရဲကောင်းများသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကို၏တန်ခိုးကိုသင်အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီကြစေ
[PVE နှင့် PVP, အမျိုးမျိုးသော Gameplay]
BlazBlue တော်လှန်ရေး Reburning ကစားသမား WIFI စစ်တိုက်သင်သည်တတ်နိုင်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်, မြင့်မားအခက်အခဲ၏အစွမ်းသတ္တိကိုစိန်ခေါ်စီးရီး၏မဟာ storyline တွေ့ကြုံခံစား, ဒါမှမဟုတ်ယှဉ်ပြိုင် mode မှာအခြားကစားသမားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လည်းကောင်းတတ်နိုင်သမျှကို select လုပ်ပါဇာတ်လမ်း mode ကို, အမျိုးမျိုးသော Gameplay, PVE နှင့် PVP နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ် သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲမျက်နှာချင်းဆိုင်!
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် http: //91act.com
တရားဝင် facebook စာမျက်နှာ: https: //www.facebook.com/bbrr.91act/
BlazBlue RR - Real Action Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BlazBlue RR - Real Action Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BlazBlue RR - Real Action Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
BlazBlue RR - Real Action Game အား အခ်က္ျပပါ
ongpohhuatiloveu စတိုး 731 267.03k
BlazBlue RR - Real Action Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BlazBlue RR - Real Action Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.28
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://91act.com/privacy_policy
လက်မှတ် SHA1: 6B:58:E3:A4:EC:2C:32:99:6B:9E:AB:89:1A:E8:36:44:2F:64:4B:4F
BlazBlue RR - Real Action Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ